Project Cycle Management (PCM) – Second Training | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
Project Cycle Management (PCM) – Second Training
Posted on December 25, 2016 by MYEO in Events, Exchange Programs, Featured, Fellowships, Forum, Graduate, Internships, Local, Postgraduate, scholarship, seminar, Training, Undergraduate, Visiting scholar program, Workshop, youth opportunities //0Comments
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအပတ်စဉ်(၂)ကိုကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနှ(Department of Rural Development) ၊ ပေါင်းစုလုပ်အားအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့(Network Activities Group) နှင့် တယ်လီနောမြန်မာ( Telenor Myanmar) တို့က ပူးပေါင်းကာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ဤသင်တန်းဖွင့်ရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ယင်းဒေသရှိ လူငယ်များ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း ပိုမိုရရှိစေရန်ဖြစ်ပြီး ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်အတွက် မရည်ရွယ်ပါ။သင်တန်းကာလမှာ အချိန်ပြည့် ၁- လ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးပါက ထူးချွန်သင်တန်းသား/ သူများသည် အလုပ်ခွင်သင်တန်း ၆-လ ဆက်လက် သင်ကြားခွင့် ရရှိမည်။ ၄င်းအလုပ်ခွင်သင်တန်းကာလအတွင်းတွင်ထိုက်သင့်သော ထောက်ပံ့စရိတ် ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို စိတ်ဝင်စားသော အသက် (၂၀- ၃၀) နှစ်အတွင်း ဘွဲ့ရလူငယ်များ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ကျေးလက်နေ လူငယ်များကို ဦးစားပေးရွေးချယ်မည်။
ရွေးချယ်ခံရပါက သင်တန်းကြေး ၁၀၀၀၀၀ (တစ်သိန်းကျပ်) ပေးသွင်းရမည်။
နယ်မှသင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ အတွက် နေထိုင်ရေးကို အခမဲ့ ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ပြီး ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ၅၀၀၀၀ (ငါးသောင်းကျပ်) ကို ပြန်လည်ထောက်ပံ့ ချီးမြှင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းတည်နေရာ။ ။ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အမှတ်- ၂၄၅၊ သံလျက်စွန်းလမ်း၊ လင်းစဒေါင်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
သင်တန်းပို့ချမည့် အဓိကဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1. Development Theories and Concepts
3. Environmental Conservation and Management
4. Natural Resources Governance
5. Political Economy Analysis
6. Community Infrastructure Development
7. Disaster Risk Reduction and Response
8. Participatory Tools
9. Communication in Development
10. Mainstreaming in Development (Gender, Inclusion, Participation, etc.)
လျှောက်ထားလိုသူများသည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ရေအကျဉ်း၊ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်၊ သင်တန်းအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြချက်၊ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ နှင့်လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ ၂ ပုံ၊ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်တို့နှင့်အတူ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ရွေးချယ်ခံရသူများကို ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားမည်။
အမှတ်- ၃၅၊ နှင်းဆီမြိုင်လမ်း၊ နှင်းဆီဥယျာဉ်အိမ်ရာ အပိုင်း- ၁၊ ၂၇ ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Applications are now open for Project Cycle Management (PCM) – Second Training
Department of Rural Development (DRD), Network Activities Group (NAG) and Telenor Myanmar are offering Rural Development and Project Cycle Management second training in January 2017. The training aims to promote rural development and youth employment; therefore offered atasubsidized price.
Full-time training will take place in Yangon, beginning in mid-January, after which we will offer competitive internships with stipend to candidates.
Internships will generally last six months and give participants the opportunity to fully maximize their skills and potential.
We are looking for graduates (20-30 years old) keen to work for rural development, preferably for rural youth.
Tuition fee is 100,000 Kyats for those who are qualified to take the training program.
Free accommodation will be provided for outstation trainees.
Stipend of 50,000 Kyats will be provided to all trainees.
Training will take place at the DRD office, 245-Thanlyatswin Street, Linsadaung, Botahtaung Township, Yangon.
6.Community Infrastructure Development
If you are interested in applying, please send your personal profile, contact number, expression of interest, one copy of your national ID, two passport photos, andapolice clearance certificate to following address by 3rd January 2017 (Tuesday). We will contact qualified candidates:
No. (35), Hnin Si Myaing Street, Rose Park (1), (27) Yard, North Dagon Township, Yangon